Warpinator inowanikwa yeApple, uye inoshanda chaizvo | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe vamwe vanogumbuka mushandisi vachipedzisira vandiudza kuti handisi chokwadi, ndinofunga ichokwadi kuti Apple ine zvimwe zvakanaka zvinhu. Kunyangwe makwikwi ataura zvakanaka nezve, zvirinani, iyo ecosystem, iri iri iro mashandiro anoita zvese zvinhu kana iwe ukashandisa zvinopfuura chimwe chishandiso cheayo marangi. Iyo Apple apple yakatanga AirDrop kare kare, uye Linux Mint yanga ichitipa kwemwedzi Warpector, chinhu Iyo yatinogona kugovana mafaera nemidziyo yakabatana kune imwechete network uye shandisa Linux.
Android ndeyeLinux-based, saka Warpinator inofanirwa kukwanisa kumhanya pane Google's mobile operating system. Zvine musoro, isu hapana chataigona kuita kana iko kunyorera kwanga kusipo, asi kuriko, sezvakangoita yakashuma Clement Lefebvre pakupera kwaApril. Iyo Android application Yakagadzirwa nemusimudziri akazvimiririra, achizviita nemazvo nekutaura munyori wepakutanga software uye nekupa chishandiso pasina muripo. Muchokwadi, haina kana kuratidza kushambadzira, iyo kune rumwe rutivi inoita kunge ine musoro uye kune rumwe rutivi inokosheswa.
Kutaura chokwadi, kuendesa mafaera pakati pemidziyo yangu ndanga ndichiabatanidza mumambure, sezvo ndine laptop ine Windows, imwe neLinux, ndine Android paRaspberry Pi ... Ndine zvishandiso zvakawanda, asi izvo ini kujekesa ndeyekuti ikozvino ini ndinoshandisa Warpinator yeLinux-based iwo, kusanganisira PineTab (nezvandakaodzwa mwoyo nazvo nguva pfupi yadarika nekuda kwekushayikwa kwekufambira mberi kukuru izvo zvinondifadza).
Kushandiswa kwayo kuri nyore kwazvo, uye kutaura chokwadi, ndichati zviri nyore kwazvo kuti izvo zvakanyorwa muvhidhiyo inguva yekutanga kana yechipiri yandakashandisa kunyorera kweLinux uye kekutanga kuApple. Ukangovhura pane ese mairi zvishandiso, uye kana vari pane imwechete network, ivo vanosangana. Panguva iyoyo, kana isu tichida kutumira kubva kuLinux vhezheni, ingo dhonza faira kuwindo rayo. Kuti uzviite pane Android, unofanirwa pombi kana baya mugove icon iyo inowoneka pazasi kurudyi.
Kune zvese zvimwe zvinhu, ndinofunga hazvikurumidze seApple's AirDrop, asi ndinogona kunge ndakanganisa sezvo iyo WiFi yelaptop yandakashandisa haisiyo yakanakisa pasirese uye paRaspberry Pi ini ndine unofficial Android. Asi, nekuda kwekureruka kwayo, kukosha shandisa Warpinator.
Warpinator ye Android inogona kuva kurodha pasi kubva kuGoogle Play.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Warpinator inowanikwa yeApple, uye inoshanda zvirinani pane zvaunotarisira
Multumesc, Foarte inobatsira!
Pindura kune dantes
GOG ine akakosha emavhidhiyo mutambo madhiri akamirira iwe